Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Caribbean » Ngo-2021 uKhenketho lweCaribbean: Gut Punched
Iindaba zaseAntigua kunye neBarbuda • Iindaba zeAruba Breaking • Iindaba zeBahamas Breaking • Iindaba zeBarbados Breaking • Iindaba zaseBelize • Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • IBritish Virgin Islands (BVI) Iindaba ezaphukileyo • Caribbean • Iindaba zaseCayman Islands • Ukubambisa • Iindaba zeDominica Breaking • Iindaba zeRiphabhlikhi yaseDominican • Iindaba zaseFransi ezaphulayo • Iindaba zeGrenada Breaking • Icandelo lokungenisa izihambi • Iihotele kunye neeholide • Iindaba zaseJamaica zokuPhula • I-Saint Kitts kunye neNevis Iindaba eziziiNgcaciso • Iindaba eziNgcwele zikaSanta Lucia • ISaint Vincent kunye neGrenadines Breaking News • komzila Ngoku • Iindaba zeTurks kunye neCaicos • Iindaba zase-Virgin zaseMelika zaseMelika • Iindaba ezahlukeneyo
Amazwe axhomekeke kwezokhenketho kwihlabathi aquka iAruba, Antigua, Barbuda, iBahamas, iSt.Lucia, iDominica, iGrenada, iBarbados, iSt. Vincent, kunye neGrenadines, iSt. , kunye neRiphabhlikhi yaseDominican (iadb.org). Kwezi ziqithi, ukhenketho lwamazwe lubomi begazi labo kwaye lwachithwa ngobusuku.
Xa i-COVID yaphakamisa intloko yayo embi kwiinqanawa zokuhamba, abaphathi babelele ebuseleni.
Imicimbi yezokhenketho, eyayinokunqunyanyiswa kwaye yaqwalaselwa kumanqanaba ayo okuqala yavunyelwa ukuba ikhule kwaye ihlasele umhlaba wonke.
Kude kube namhla, iinqanawa zokuhamba ngenqanawa kunye nabaphathi bezokhenketho, amagosa aseburhulumenteni, kunye namagosa anyuliweyo bahlala benqaba ukuthatha uxanduva lokungakhathali kwabo.
Uninzi lwabo babephethe iinqanawa okanye ishishini lokhenketho zange baxolise ngokungakhathaleli inyani kunye nesayensi kunye nendlela yabo "entlabathini" kulawulo lwemibutho yabo kunye nentlalontle yabakhweli kunye nabasebenzi.
The Ukuwa okungafunekiyo yimveliso yokusilela ngokupheleleyo kweCaribbean Ukwahlulahlula imisebenzi yayo yoqoqosho kunye nembono ye-myopic yezixhobo zayo. Le yenye yezona ndawo zinomhlaba omncinci ohlukeneyo kunye nokubalwa kwezokhenketho kwiipesenti ezili-14 ze-GDP ngo-2019, uninzi lwayo nayiphi na imimandla. Amazwe e-LAC aphakathi kwezona ngxaki zixhaphakileyo kwihlabathi kwaye iintlekele zendalo zifana nemisebenzi yemihla ngemihla kunokuba yothuse okanye yothuse. Yintoni entsha, nangona kunjalo, sisantya esothusayo kunye nesoyikisayo kunye nokuzingisa apho icoronavirus ichaphazele isiseko soqoqosho sale ndawo.
Ukuphuma kubusuku bokunyanzeliswa, ukubuk 'iindwendwe, ukhenketho, kunye nabaphathi bezokhenketho abasinde kwesona sibetho sibuhlungu ngoku bashiyeke nomsebenzi omkhulu wokulusa ishishini kude nenkxaso yobomi kunye nokuyigcina ibuyele empilweni.
Njengaye nabani na obegula-kukho isidingo sokuthatha amanyathelo (rhoqo amanyathelo omntwana), ukuze usuke ekuguleni uye ekubeni sempilweni. Ukuba abaguli banethamsanqa, izihlobo, usapho, kunye neengcebiso ezilungileyo ezivela kwi-Google pundits ezikwi-Intanethi ziya kubonelela ngeendlela zokubuyela kwimeko yesiqhelo. Izigulana zinokukhubeka zibuyele umva ngesilayidi amaxesha ambalwa, kodwa ngokuzola nokuzimisela, ziya kuphila kwaye zilungele umlo.
NgokweBhanki yoPhuculo yaseMelika (i-IDB) ubhubhane we-COVID-19 kwakhokelela ekwehleni koqoqosho okumbi kweLatin American naseCaribbean kwiminyaka engamakhulu amabini. Ngaphandle kobunzima bezoqoqosho yimpembelelo etshabalalisayo yobhubhane kuluntu lwengingqi nakwiinkqubo zempilo. Nangona ingingqi imele nje iipesenti ezisi-8 kubemi behlabathi inike ingxelo yeepesenti ezingama-28 zabo bonke abaswelekileyo (atlanticcouncil.org).
Kwanangaphambi kobhubhane, uqoqosho lwengingqi ngokubanzi lwaluyinto embi emhlabeni ukulinganisa kuphela iipesenti ezi-0.1 zokukhula kwimveliso yasekhaya (GDP) ngo-2019. Phakathi kowama-2013 nowama-2019, ukukhula kweLatin America kunye neCaribbean GDP kukhule nge-0.8 yepesenti kunye nommandla. khange ikwazi ukuphuhlisa uqoqosho oluzinzileyo.
Amazwe ahluleke kakhulu ukufikelela kuluntu nakwizinto zabucala, ukusukela kumathuba ezoqoqosho kunye nemfundo ukuya kukhathalelo lwempilo kunye nendawo ecocekileyo / ekhuselekileyo eyenziwe mandundu ngamanqanaba aphezulu okungahlengahlengiswa kwabasebenzi, utyalomali lwabucala oluphantsi (iipesenti ezili-16 ze-GDP), xa kuthelekiswa nezinye imimandla, kwaye oku kuchaphazela imveliso, ukuvelisa izinto ezintsha kunye nokudalwa kwemisebenzi ngokusesikweni (cepal.org, 2020).
Ukusukela ngokuvalwa kwezikhululo zeenqwelo moya kunye nezithintelo ekuhambeni kwabathengi, ukufika kwabakhenkethi baseCaribbean kwehle ngama-67 eepesenti ngonyaka we-2020 ngokweedatha ze-UN, i-IMF igqibe kwelokuba ukuhlala kwehotele ngonyaka kuye kwehla ngeepesenti ezingama-70, kwaye ukuhamba ngenqanawa ngenqanawa kuyeke kwaphela.
Ngaphandle kweenkqubo zokugonya kunye nokwehla ngokuthe ngcembe kwezithintelo zohambo, ukubuyiswa kweCaribbean kuyacotha kakhulu kunyanzela iNgxowa-mali yeMali yeHlabathi (i-IMF) ukuba yehlise izinga lokukhula eliqikelelweyo ngo-2021 ukusuka kwi-4.0 ukuya kwiipesenti ezi-2.4 kwingingqi yonke. Kubekho okungenani i-38,789,000 yezigidi zosulelo oluxeliweyo kunye ne-1,310,000 yokufa okuchazwe yinoveli coronavirus eLatin America naseCaribbean (graphics.reuters.com). Kuzo zonke izifo ezili-100 zokugqibela ezichazwe kwihlabathi lonke, malunga nama-26 axelwe kumazwe aseLatin American naseCaribbean. Ingingqi okwangoku inika ingxelo yosulelo olutsha rhoqo malunga neentsuku ezisi-8 kwaye inike ingxelo engaphezulu kwama-38,789,999 okoko kwaqala ubhubhane.
Ukuncitshiswa kwabakhenkethi kwanyanzela ishishini ukuba linciphise ingqesho-ethi, kwingingqi apho ukhenketho lubangele imisebenzi ezizigidi ezi-2.8 (malunga neepesenti ezili-15 zengqesho iyonke) Eli lixesha elinzima kwezoqoqosho. Lilonke, iCaribbean ilahlekelwe yimisebenzi engaphezulu kwezigidi ezi-2 ngenxa yesifo (uMbutho waMazwe ngaMazwe wezabaSebenzi), uninzi kwicandelo lezokhenketho.
Njengoko amazwe e-LAC ejongene namaza amatsha e-coronavirus phakathi kwephulo lokugonya elicothayo, ukubuyela kwimeko yesiqhelo kuya kuba nzima. Iipropathi ezinkulu zivaliwe: KwiRiphabhlikhi yaseDominican, igumbi elingu-400 lokuGqwesa ePunta eKana; eJamaica, kwiHalf Moon Ihotele eJamaica (400); Kitts, kwigumbi lama-50 i-Ocean Terrace Inn.
Kwelinye icala iiNdawo ekuchithelwa kuzo iiSandals Resorts kunye neeLwandle iiholide zaye zagcina intengiso iqhubeka, zaphuhlisa eyazo inkqubo yokugonya kunye nokhuselo lokhenketho kunye nemigangatho yezempilo. Isiphumo sibe ngamazinga aphezulu okuhlala kuyo yonke le ngxaki, ngokusekwe kukuthenjwa kwabathengi okuphuhliswe ngamaphulo okufikelela kuluntu.
Iisandali kunye neeLwandle iiholide zathembisa ngeholide engenaxhala kwaye ndikwazile ukufeza kwesi sithembiso ukuza kuthi ga ngoku.
Ukhenketho akunakulindeleka ukuba luphindaphinde de loo mmandla ulawule intsholongwane. Okwangoku, i-Pan American Health Organisation ifumanisa ukuba umhlaba "uphakathi kokuqhambuka okuya kusiba kubi," kwaye intsholongwane iyaqhubeka nokufika kwisiqithi-hop kwiiCaribbean apho inani lamatyala linyuka mihla le, kwaye oorhulumente abanamatyala eCaribbean banezixhobo ezimbalwa zokugcina uqoqosho lwabo luqhubeka .
UMphathiswa wezoKhenketho eJamaica, u-Edmund Barlett ujonge lo mbandela ubanzi ngeliso lehlabathi kwaye wayithatha le ngxaki. Ivumela iJamaica ukuba ibe negalelo kwisisombululo kwaye yenza nelizwi laseCaribbean ukuba live ngokuvakalayo nangokucacileyo. IJamaica yaba likhaya leZiko eliQinisekileyo lezoKhenketho kwiHlabathi liphela kunye neZiko loLawulo lweNtlekele elinamasebe eMalta, eNepal, eKenya, kwaye kungekudala nase-Saudi Arabia. Uxelele uBartlett eTurboNews, ukuba wonwabile malunga nokuhla kwamanani okufika kweendwendwe ezikhoyo ngoku.
Ukuphulukana nengqesho kwicandelo lezokhenketho kunefuthe phantse lonke kulutsha, kwabasetyhini nakubasebenzi abangafundanga kwaye ke oko kuyonyusa indlala nokungalingani. Ukunqongophala kweyantlukwano kunye nozinzo kukwazisa ukuvalwa kweshishini kunye nokungabikho kwemali phakathi kweehotele, iindawo ekuchithelwa kuzo iiholide, kunye namanye amacandelo anxulumene neenkonzo zokhenketho (okt, iivenkile zokutyela, ivenkile, abathengisi bakhenkethi, abaqhubi beeteksi). Ngokwehliswa kwenqwelomoya kunye nokuqhubeka kokungavisisani nokuthathwa kwezigqibo kwicandelo lokuhamba ngenqanawa, amahlakani eshishini axhomekeke kubakhweli beenqanawa zokuhamba ngenqanawa akukho nto anokuyenza ukuba iinqanawa zirhoxisiwe ngokusisigxina okanye zabuyiselwa kwezinye iindawo.
Ummandla weCaribbean ukhona ikakhulu ematyaleni. Nangona uluntu lwemali lwamazwe aphesheya luvule isipaji salo ngokudibeneyo ukuhlangabezana nemfuno yenkcitho yoluntu kulo mmandla, inkxaso ibiyikrele elintlangothi-mbini; uxinzelelo lwexesha elifutshane luye lwancitshiswa kodwa amazwe amaninzi ngoku ajongene nomceli mngeni njengoko ukukhula kwemali kunqongophala kwaye ukuboleka kuya kusiba nzima kwaye iingxaki ziyaqhubeka.